Nuurka Aqoonta Hido-dhaqameed dhalin kara horusocod, iyo Xadaarad aan guur-guurin!: Ummad Haligmeysa Waxaa lagu Gartaa:Duliga Culumada iyo Khiyaanada Hogaamiyayaasha (Qab-Qab-Layaasha)
Ummad Haligmeysa Waxaa lagu Gartaa:Duliga Culumada iyo Khiyaanada Hogaamiyayaasha (Qab-Qab-Layaasha)
Midaadii qaaska kuu ahayd iyadoo ay ku cunayso, ooyan kuu raxmeyn ood waliba kula jirto halgan aadan wali rajadiisii dhigin! ayaad sidaad isu leedahay waxaa jira Caqli iyo Qibrad xanuun Badan oo lasoo maray- ood isu leedahay "Anaa Rabul Ibil (Daruufahaaga Shaqsigaa Sugitaankooda) Wal Bilaad Lahu Rabi Yaxmii" Dalkiina wuxuu leeyahay Rabi Ilaaliya!. ood isu leedahay rag cusub baa soo baxay oo isb-badal doon ah? dhibkana og....ood kaaga darane aad adigu isaga dhaadhicinayso rag wax garanaya oo basarkoodu fiican yahay baa jira! ayad si fajiciso leh waxaad u maqli war iyo walbahaar is wata? hareerahaaga ayaad eegi mise waa laga sii darayaa oo wax soo hagaagaya ma jiraan???!!!!
Xadiis Buu Rasuulkeenii Suubanaa ku yiri "Laba Qaybood (Nooc) oo Ummadeyda ka mid ah haday wanaagsanaadaan Ummaduna way la wanaagsanaan, Hadey Xumaadaana way la xumaan" "Labadaas waa Labadaas waa Fukhahada(ninkii uu ilaahay diintiisa Fahamsiiyay) iyo Hogaanka (Amiirka)"! Lafdi kale (Warin kale) aya waxay leedahay "Hadii ay Culimada iyo Hogaanka Ummadu ay Saalax Noqdaan Ummadana Saalax bay Noqotaa"!
wax sharaxaad ah uma baahna, laakiin waxaan soo aragnay Hogaamiyayaashii "Axada" Axadu waa 30-12-1990, maalin shar badan ayaanu aragnay waxa la yiraahdo Hogaamiye, ilaa xiligan la taagan yahay waxaa noo socda Casharo aan dhamaad lahayn oo is barasho ka dhaxeysa Iyaga iyo Shacabkii Masaakiinta ahaa?! inkastoo intoodii badneyd Qarashkii ku Baxay uu shacabku Bixiyay Fatuurada (Boonada) Qiimahaas Isbarasho ayaa hadana aysan u qalmin inta ay baaxadiisu le'eg tahay darteed iyo Shakalka ay Hogaamiyayaashaas Arxanka darnaa/Daran ay leeyihiin?
Hadaan si hoose ugu dego maqaalkeygan Dulucdiisu waxay ahayd. waa Taariikhda Doqonimada leh ee Culimada Soomaalida ah ee Afaadilka ahi ay u seegi jireen Xalka Caqlaaniga ah ee Ummadooda Isbadalka ay la Rabaan lagu gaari karo!
Si Kastaba ha ahaatee waxaan nasoo galay Taxadigii ugu horeeyay ee lagu sameeyay Maal-Maati Qabeenada Rag-Xumayaasha ahaa oo ay ku Sameeyeen Culimadii Diinta Islaamka Qaas Ahaan Culimadii Salifiyiiinta Dacwiga iyo Jihaadigaba isugu jiray? Laakiin Imisa jeer bay Culimadaasu ay ka nixiyeen oo ay ula dhaqmeen Ummadii Bislaatay ee Taageertay ooy u keeneen "Rajo Xumo" iyo "Ka Dar oo Dibi Dhal".
Hadii Faqiihii Suufiga ahaa ee wax ka unkay Hogaamiyahaas xun? Shucuudiga iyo Curaaftankiisiina la daba is taagay isagoo le "Fiqi Tolkii Kama Jano Tago", iyo inuu dagaalka Qabaliga ah ka qayb qaato isagoo Qab'Qablayaashii u aqrinaya "Shankaroortay" iyo "Asmo" oo ka mid ah Xarbi Nafsiga ay ku Quraafaysan jireen si ay "Biliqada" qabqablaha qaybtooda uga helaan. oo uu raacay markii ay ka taqaluseen hadii caqli iyo cilmi ay keeni waayaan labadiiba waa ay soo noqon?
Xiligii loo riyaaqay Culimada Salafiyiinta ah waa Maalintii ay nagu bilaabeen inay Jus Taraawiixda nagu Tujiyaan Masaajidkii Ceel Hindi, dhab ahaantii waan soo dhaweynay oo waxaan ogaanay in Rooxaaniyada Sare ee ay leedahay?! iyo qaar badan oo shuyuush Afaadil ah oo ka mid oo iyaguna bilaabay Dacwo iyo Furitaan Dugsiyo Carabi-Islaami ah oo Saxiix ah si ay si cilmiyaysan Boorka uga Jafaan meeshana uga saaraan Kuhaantii Murtaziqiinta ahayd! waxaa la xusi karaa Sheekh aan aniguba cajaladahiisa dhagaystay oo aad iyo aad qaali u ahaa (AUN) Sheekh Boqol Soon oo isgu si kalankooli ah u duubi jiray Cajalado Wacyi Galin ah, ayaan maalintii danbe Masaajidkii Sheekh Cali Suufi sidii in la yiri oo kale Xabada Naxariista Rida ay Geeskoodii ka bilaabeen "Dhidiba u Siibidii Nidaamkii Dalka ka Jiray" hal mar ayaan ka rajo dhignay!
Mar Labaad ayay buuxiyeen Barxadii ay Banaysay Burbujrkii Dowladii Dhexe qaas ahaan Goboladii Waqooyi bari oo hada loo yaqaan Puntland, waa lasoo dhaweeyay laakiin hal mar ayaa waxaa la arkay iyagoo Xisaab-Xumo Waaqic Inkirid iyo in Caadifadii ay Caqligoodii ka itaal roonaatay!? Waa laga naxay mar labaad
Mar sadexaad ayaan gacanta ka galinay kuna taageernay Maal iyo Naf iyo wax kasta oo la heli karo loona dhiibay Gabi ahaanba Gobolka Gedo; Lix Sano markay is celinayeen oo ay is hayeen? iyogoo galayay Jahli dartiis Qaladaad Dilaa ah oon loo dulqaadan karin ayay ileyn Barnaamij Siyaasi ah oo Gudaha Dalka ah Ma lahayn ee waxay lahaayeen mid Caabir Al-Qaaraat ah oo Qaaradaha Gudbubsan! maalin bay waxay yiraahdeen Addis Ababa ayaan aadeynaa?! Mar sadexaad ayay Caadifadoodii ka xoog badisay Caqligii Yaraa ee hadana waynaa Qibradaha Soo Maray Dartiis?! waa la ogaa wixii ka dhacay kala carar maxaa yeelay Itoobiya oo Dowlad ah markay saas Yiraahdeen Dhulkay isla dhacday oo tiri ma ujeedaan Caalamkoow Addis Ababa ayay Rabaan nimankaas, hadee sida caadadu ay tahay waxaa caalamku Siiyay Itoobiya Amarka inay is difaacdo? markaana waala Calool Go'ay!? oo wax ala waxay qabteen, oo ay dhiseen waa la burburiyay!!
Mar Afraad 2006 dii waa iyagii dheel-dheeshoodii bilaabay oo hadana iyadoo ay qoyan tahay inta Shuhado ah ooy bixiyeen iyo inta Qasaare maadi iyo Macnawi ah ooy Sababeen ayay hadana Yiraahdeen Caalamkii oo dhan oo Aqoonsaday Asbaabaha ay ku Yimaadeen ayay Yiraahdeen "Addis Ababa Meelaan ahayn nama Celiso" iska inay Xitaa Nidaam u dhisaan Lix Bilood ka hor Magaaladii ay Qabsadeen ee Xamar? Waa la ogaa waxa qabsadey Ummadiii Soomaaliyeed oo dhan!!?? waxay galeen dagaal ay ka baaqsan kareen oo ay caqliga ka hor marin lahayeen Caadifada iyo Dilka iyo Burburka Ummaddii ay iyagu ka dhasheen ee ay ogaayeen sida loo silciyay oo Kufaday loo Burburiyay, dagaalkii hadda waa dhamaaday Maxaa laga filayaa nimankaas?
Waxaa laga filayaa inay Itoobiya Xaq u siiyaan inay Soomaaliya Gudaheeda ka sameysato Degaano Nabada dalkeeda ay ka ilaaliso "Peace Zones" oo la mid ah kii ay Israa'iil ka Sameysatay Koonfurta Lubnaan oo kale, haday sii wadaan Handadaadooda HadAF "LA'AANTA AH" maxaa Yeelay Xayawaan ka mid ah oo maalin dhaweyd uu wareystay Wariye Caddow ee Al-Jazeeraha Ingiriiska ah ayaa wuxuu ku hadaaqay hadal aan la yaabay cidii dhagaysanaysayna ay la fajacday! wuxuu yiri "Anagu waxaan u soconaa Alaska iyo China" waa la yaabay la'anfariiray, nafiskii ayaa nagu xirmay.
dhanka kale dhinaca kale ee Sheekh Shariif isaguna ha ogaadi inuusan isku qasin "XAQA BAADIL LAGU RAADINAYO" yacni xaq lagu doonay baadil oo lagu rati kacsanayo si loo helo faa'iidooyin Mustaqbalka-dhow u badan, teeda kalana ku guur-guurida si qaldan oo la mid ah kii qab-qablayaashii waxay luminaysaa taageeradii guud ee loo haayay waxay deg-deg ku fashilinaysaa wax alla waxa uu wado Sheekh Shariif, maxaa yeelay waa lagu rajo weyn yahay!?.
Dhanka kale Nidaamka "MAXAASASAH" EE XISADAYNAYA SHACABKA ama waxa la yiraahdo "AFAR IYO BAR" oo sidoo kale cilmiyan loogu yeero "Dimuqraadiyada Tawaafuqiga ah", oo isaguna u rahma oo u xir-xira Xalkii Shacabka Quwado Shisheeye oo uu daraf walbaahi ku xiran yahay xoogna ka raadinayo. taas waxaa leeyahay iyadana hala ogaado kuwa ku haray ee uu Hogaaminayo Nuur Cadde iyo Adan Madoobo inay rabaan Ciyaar aan dhamaad lahayn oo ay Ummadaan ay Aafaysay Masaa'ibtu kula dhex-Bood-Boodi doonaan sida mida Lubnaan oo aysan jiri doonin Guul Joogto ah iyo Guul daro Joogto ah.
ugu dabbeyntii waxaan leeyahay Culimada Salafiga ah ee ay kala hogaaminayaan Sheekh Shariif oo si karti ay ku jirto u gashtay Shaartigii Ikhwaanul-Muslimiinka iyo Al-Shabaab iyo Kooxaha kale ee Jihaadiga ah inay Ummadaan Duleeyaan aan mar danbe loogu dulqaadan doonin oo lawada ogyahay hadda wixii xun iyo wixii fiican. ayna u qoraan siyaasada inay u baahan tahay Fiqiga Sharciga ah iyo kan Waaqiciga ah labadaba. oon Diintii Muqadas nimadeedii la dilin iyada kaliya ayaa u hartay Ummadaan Soomaalida ah ee Wax kasta lagu soo Jaribay sida Jiirka!? loona daayo Siyaasada Qeexitaankeeda inay tahay Tartan loogu Jiro Ilaha Dhaqaale ee Mujtamaca sidii loogu Celin lahaa oo loogu maal galin lahaa- Haadaa Wasalaam! maxaa yeelay nin ay Soomaalidu ka aqbalayso Ma jiro Inuu yahay Wakiilu-Laahi Fil Ardi- ama Wakiilkii Eebe ee Dhulka oo Shacabku waa wada wukalaa.
Federaalkana ha ogaado in Mujtamcaan uu u baahan yahay Caqli iyo Xigmad Cilmiyaysan oo dareensan waxa ka dhacaya hareerahiisa oo aysan u baahnayn in laysku daba wareego?
Marka intaa la ogaado, ayaa waxaa si wadajir ah loo sixi doonaa wax walba oo qaldamay DULIGA UMMADA HAYSTANA WUXUU KU XIRAN YAHAY MARKII AAD IDINKU QAAS AHAAN WADAADADA AY OGAADAAN INAY SABABTEESU TAHAY IYAGA.
Hanqaastii Saadaat Maxamed Yusuf Geesh
Posted by Nuurin-Hiddeed at 11:36 AM